Mandraisa Anjara Hihaona amin’ireo Mpikatroka Nomerikan’ny Teny Indizeny Ao Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2015 2:09 GMT
Sarin'ny Plaza Bolívar en Bogota, Kolombia avy amin'i Daniele Pieroni, zon'ny mpamorona CC BY-SA 2.0 license.
Manankarena teny i Kolombia izay manana teny indizeny mihoatra ny 60 ampiasain'ireo olona manodidina ny 1 tapitrisa manerana ny firenena. Manankarena fomba amam-panao sy fahalalana ara-kolontsaina nampitaina tamin'ny taranaka fara-mandimby ireo teny velona ireo. Miatrika zava-tsarotra tokana ireo vondrom-piarahamonina vazimba teratany satria tian'izy ireo ho azo antoka mba hihazona ny tenin-drazana ny taranaka any aoriana. Na izany aza, ny fihanaky ny teknolojia sy ny aterineto dia manome fahafahana manokana hoan'ny fiarahamonina hamoronaan votoatim-baovao nomerika amin'ny tenindrazany no sady mifandray amin'ny hafa izay mizara tanjona mitovy amin'izy ireo amin'ny famelomana ny teny, .
Ho afa-mivory Bogotà mandritra ny Fihaonan'ny Mpikatroka Nomerika Misahana ny Teny Indizeny amin'ny 18-19 Jiona 2015 ho avy izao ireo mpiserasera ao Kolombia mampiasa am-pivitrihana ny habaka sy ny fitaovana haino aman-jery nomerika ho fampiroboroboana sy ho famelomana indray antserasera ny tenin-drazan'izy ireo. Hamory mpandray anjara 15-18 manerana an'i Kolombia ity hetsika izay iarahan'ny Global Voices amin'ny alalan'ny tetikasa Rising Voices mikarakara miaraka amin’ny Caro and Cuervo Institute, sy ny vondrom-pikarohana Muysccubun ary tohanan'ny Hivos ity hifampizarana traikefa, hifampianarana fahakingana nomerika vaovao ary handraisana anjara an-dresaka momba ny zava-tsarotra sy paikady amin'ny famelomana ny teny indizeny amin'ny alalan'ny fampiasana ny aterineto.
Manohy ny asan'ny tambajotran'ny fikatrohana nomerika momba ny Teny Indizeny izay natomboka tamin'ny hetsika tahaka izao tao Oaxaca, Meksika tamin'ny Oktobra 2014 ity hetsika ity, ka mpikatroka nomerika 25 manerana an'i Meksika no nihaona tamin'izany mba hizara ny tetikasa nomerikan'izy ireo sy nifandray tamin'ny hafa.
Tsidiho azafady ny antso misokatra ho an'izay handray anjara raha mila fanazavana fanampiny momba ny hetsika. Afaka mametraka ny fangatahan'izy ireo amin'ny fisoratana anarana an-tserasera ireo olona liana. Ny fe-potoana farany fandefasana fangatahana dia amin'ny Alarobia 27 mey 2015 amin'ny 9 ora alina, ora Kolombiana. Misy ny fanampiana ara-bola feno na ampahany hanampiana handoavana ny saran-dalana sy ny fampiantranoana ireo mpandray anjara monina ivelan'ny faritra Metro Bogota.